Paompy famenoana menaka | Paompy famenoana menaka SJB-D60
Home/Paompy feno voatavo/Grease Filler Pump SJB-D60 - Paompy Filler Grease Manual, 60ml / stroke stroke volom-pamonoana menaka, Fandidiana tanana
Product: Paompy famenoana menaka SJB-D60
1. Mora miasa amin'ny tanana, maivana ho an'ny portable
2. Ny habe kely sy ny endrika compact, min. saran'ny fikojakojana
3. Miaraka amin'ny barika menaka 13.5L, mifandraisa aminay raha misy refy mahazatra
Ny paompy famenoana menaka SJB-D60 dia famenoana menaka manual, paompy fampandehanana tanana, izay ampiasaina amin'ny famenoana ny menaka na menaka amin'ny paompy fanosotra manual na paompy fanosotra elektrika kely misy haavon'ny tsindry 10MPa sy 120 MPa.
Ny paompy famenoana menaka SJB-D60 dia miasa amin'ny alàlan'ny tahony, rehefa midina midina amin'ny tànana miasa, mihidy ny fanakatonana ary mihena ny habetsaky ny efitrano piston, ny menaka manaraka ny hose conveyor mankany amin'ny fitahirizana solika, ny ampahany ambany amin'ny volume piston tsikelikely. mitombo, fanerena ratsy hanokatra ny suction ampahany, ny anatiny barika menaka inhalation. Rehefa miakatra ny fihazonana, ny efitrano piston dia mamorona tsindry ratsy, misokatra ny valva, mihidy ny ampahany amin'ny suction, manosotra ny efi-trano ambony amin'ny piston. Rehefa averina midina indray ny tahon'ny paompy famenoana menaka SJB-D60 dia avereno ilay dingana.
Mariho tsara alohan'ny fandidiana ny paompy SJB-D60:
Ny tendrony iray amin'ny fantsona solika dia mifandray amin'ny fivoahan'ny paompy solika, ary ny tendrony iray dia mifandray amin'ny seranan-tsambo famatsian-tsolika, ny faran'ny fitoeran-tsolika fitehirizana solika dia mihodinkodina amin'ny bolt saron'ny boaty.
Ny habetsahan'ny menaka na menaka ao anaty barika dia tokony hojerena tsy tapaka, mba hisorohana ny fitsofan'ny rivotra ao anaty fitoeran-tsolika.
Kaody famandrihana ny paompy famenoana menaka SJB-D60 Series
(1) SJB = Paompy famenoana menaka manual
(2) Fanerena nominal = 6.3bar / 0.63Mpa
(3) Volan'ny famahanana = 60mL/kapoka
Paompy famenoana menaka SJB-D60 - angon-drakitra teknika paompy famenoana menaka
SJB-D60 0.63MPa 60mL / tapaka lalan-dra 13.5L 170N 13Kgs
Fanamarihana: Mampiasa ny fitaovana ho an'ny fidiran'ny cone 310 ~ 385 (25 ℃, 150g) menaka 1 / 10mm (NLGI0 # ~ 1 #).
Paompy famenoana menaka SJB-D60 andiany fametrahana refy
[email voaaro]2021-11-17T22: 05: 53 + 00: 00